सागर बुढाथोकी/ जेष्ठ ६, 2079
चिकित्सकको हकहितको लागि खुलेका संस्थाका पदाधिकारीको समेत आफ्नै अस्पताल छ। प्रशासकको कनेक्सन, राजनीतिज्ञसँग र राजनीतिको कनेक्शन मेडिकल व्यवसायीसँग भएकाले नीतिमै प्रभाव परेको डा. सुवेदी बताउँछन्।
“विशिष्टीकृत सेवाको दरबन्दी नराख्नु एउटा दृष्टान्त हो, व्यवसायीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अन्य दर्जनौं अनियमितता गरेका छन्”, डा. सुवेदी भन्छन्। खाेज पत्रकारिता केन्द्र